कसैले नटेर्ने अवस्थामा पुगे दुईतिहाईका केपी ओली | नेपालबहस
साइबेरियाली सुन खानी भत्किँदा १५ को मृत्यु, १३ जनाभन्दा बढी वेपत्ता
यस्ता छन्, एनआरएनएका बाचा [थाहा पाउनुस]
नेप्से परिसूचक पाँच अङ्कले ओरालो
गरिमा ब्राण्डको धानमा बाला नलागेपछि बर्दियाका कृषकलाई लाखौंको नोक्सान
धानमा कालो पोके रोग लागेपछि किसान चिन्तित
सिम्रौनगढ नाकाबाट १९ किलो चाँदीसहित एक पक्राउ
दशैँको समयमा उपत्यकामा ३५० सवारी दुर्घटना, १० को मृत्यु
गुण्डानाइके ‘बाघे’ प्रहरीकाे फन्दामा
विप्लवका दाजुसहित पक्राउ पर्ने २१ जना अदालतमा
शब्दचित्रमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी र ‘सी विचारधारा’
दिक्तेल बहुमुखी क्याम्पसको सञ्चालक समिति चयन
कसैले नटेर्ने अवस्थामा पुगे दुईतिहाईका केपी ओली
दुई तिहाई समर्थनमा बनेको सरकार प्रमुख भन्छन् – मलाई गुमराहमा राखियो ।
उनै कार्यकारी प्रमुखका अवयव भन्छन्– मलाई सचिवले फसाए ।
अर्का मन्त्री भन्छन्– क्षमता हुँदाहुँदै सरकार पछि हट्यो ।
माथि उल्लेखित तीनवटै अभिव्यक्ति इतिहासकै सर्वशक्तिमान प्रधानमन्त्री भनिएका कम्रेड खड्गप्रसाद ओली स्वयं र उनको संयन्त्रको हो ।कसैलाई नटेर्ने स्वभावका प्रधानमन्त्री यति निरिह र रुञ्चे देखिनु लोकतन्त्रकै उपहास हो । अब सर्वसाधारण सोध्न विवश भएका छन् – आखिर यो सरकार चलाएको कस्ले हो ?
प्रधानमन्त्री जस्तो जिम्मेवार पदमा बसेको व्यक्ति पँधेर्नी आइमाई जस्तो फत्तर फत्तर गर्नु देशकै बेइज्जती हो । प्रधानमन्त्री पदको गरिमा बुझ्न सक्ने हैसियत ओलीमा देखिएन । अरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण र गर्ने व्यवहार पद सुहाउँदो छैन । विपक्षीप्रति गर्ने कटाक्ष उनको बानी टोले गुण्डाको जस्तो लाग्छ ।
कार्यकारी प्रमुख सार्वजनिक थलोमा आएर यस्तो लाचार अभिव्यक्ति दिन्छन् भने जनताको हालत के होला ? सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
राष्ट्रवादको नक्कली खोल च्यात्तिएपछि ओलीको होस हवासले काम गरेको छैन । आईफा र विषादी प्रकरणले ओली नांगेझार भए । लोकलाज छोप्न जतिसुकै प्रपञ्च गरेपनि काम लागिरहेको छैन । आफ्नो अभिष्ट पूरा नभएकाले नै ओलीको क्रोधयुक्त पीडा बाहिर आएको छ । ओली इतिहास कै नालायक र नक्कली राष्ट्रवादी प्रधानमन्त्रीका रुपमा दरिएका छन् ।
ओली नेतृत्वमा बनेको सरकार आम नागरिकलाई सेवा प्रदान गर्न मात्र चुकेन शासन चलाउने तौरतरिकाबाट समेत उपेक्षित बन्न पुगेको छ । सरकारी संयन्त्रले फसायो भन्नेको ताँती छ मन्त्रीहरुको तर कसैलाई कारबाही गर्ने ल्याकत छैन ओलीसँग । किनभने मुलुकको स्थायी सरकारका रुपमा रहेको निजामती कर्मचारीलाई नक्कली राष्ट्रवादको पगरी गुथ्नु छैन । बरु नक्कली राष्ट्रवादको मुखुण्डो च्यातिएपछि लाज पचाउन अनेक वहानाबाजी गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ओली र उनको मण्डलीलाई ।
भारतसँगको व्यापार घाटा झण्डै आठ खर्बको छ । हरेक चीज भारतबाटै आयात गर्न हामी बाध्य छौं । पैसा तिर्ने उपभोक्ताले सही र स्वस्थ खाद्य पदार्थको अपेक्षा गरेको हुन्छ । त्यसका लागि सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने हो । सोही बमोजिम भारतबाट आउने तरकारी तथा फलफुलमा प्रयोग भएको विषादी जाँचेर मात्र आओस् भन्ने आम उपभोक्ताको चाह हो । सुरुमा नक्कली राष्ट्रवादको लाज ढाक्ने अस्त्रका रुपमा प्रयोग गर्न खोजिएको अस्त्र थियो, विषादी परिक्षण प्रकरण । तर भारतीय पक्षले चर्काे दवाव सिर्जना गरेपछि ओली निर्णय फिर्ता गर्न बाध्य भए ।यो प्रकरणले उनको नक्कली राष्ट्रवादी छवि अझै निर्लज्ज बनाइदियो ।
दुनियाँलाई थाहा छ, ओली नक्कली राष्ट्रवादको विगुल बजाउँछन् । ०५१ सालको संसद्मा महाकाली सन्धि पारित गर्ने बेलाको ओलीको अभिव्यक्ति सम्झने जिवितै छन् । अनि उनै ओली भारतविरोधी भन्दा कस्ले पो पत्याउने होला ? सत्ताको उन्मादले ओलीलाई रतन्धो लागिसकेको छ । उनी नजिकैको पनि देख्दैनन् । सीमित व्यक्तिको चंगुलमा परेका ओली न पर देख्छन् न त सुन्नछन् नै ।
तैपनि ओलीको हुँकार भने उस्तै थियो । आफ्ना सांसदलाई भेला पारेर हकार्दै थिए – भारतले पत्र पठाएको देख्ने को हो ? कस्लाई आयो पत्र ? नचाहिने कुरा बोल्ने ? भोलिपल्टै उनको झुठ छताछुल्ल भयो । भारतीय दूतावासले सरकारलाई पठाएको पत्र सार्वजनिक भयो । अनि ओली भन्न थालेका छन् – विषादी प्रकरणमा मलाई फसाइयो ।
अब ओलीका दुर्दिन सुरु भइसकेका छन् । आवरणमा हेर्दा उनी बलशाली देखिएका होलान् तर अन्तरवस्तु भने शिथिल र फितलो भइसकेको छ । लैनचौरको चाहनासमेत अब नयाँ प्रयोगको पक्षमा रहेको प्रतीत हुन्छ ।
अब नेपाली जनता धेरै बुझ्ने भइसके । ओलीको बोली राम्रो बुझेका छन् । ओली जस्तो बलशाली र धूर्त खेलाडीलाई कसैले फसाउने भन्ने कुरा पत्याउनै गाह्रो । एउटा झुठ दबाउन उनी सयौं झुठ बोल्न तयार छन् । अझ राष्ट्रवाद जस्तो संवेदनशील मुद्धामा उनी कसरी चुक्थे । त्यसैले जनताको सहानुभूति लिन उनी भन्दैछन् – विषादी प्रकरणमा भारतले पठाएको पत्र मलाई देखाइएन , मैले लज्जित हुनु प¥यो , क्षमा प्रार्थी छु ।
साँच्चै नै उनलाई सूचनाबाट वञ्चित गरिएको हो भने कारवाही गर्नुपथ्र्यो , न की माफी माग्नु ।
विष्णु रिमाल, राजन भट्टराई र गोकुल बाँस्कोटाको बोली मात्र उनलाई प्रिय लाग्छ । तीनै जनाको शासकीय क्षमता भने शून्य छ । यस्ताको सल्लाहले देश चलाउँदा आउने परिणाम स्वभाविक छ । अब ओलीका दुर्दिन सुरु भइसकेका छन् । आवरणमा हेर्दा उनी बलशाली देखिएका होलान् तर अन्तरवस्तु भने शिथिल र फितलो भइसकेको छ । लैनचौरको चाहनासमेत अब नयाँ प्रयोगको पक्षमा रहेको प्रतीत हुन्छ ।
अघिल्लो लेखसबैभन्दा बढी विदेशी पर्यटक बोक्ने नेपाल एयरलाइन्स पहिलो स्थानमा
अर्को लेखब्रेन ट्युमरबाट पिडित बिरामीको सहयोगमा बगनासकाली
नेकपाको चियापान : समोसा, निम्की, केरा र लड्डु [फोटोफिचर]
प्रधानमन्त्रीले लगाइदिए सर्वसाधारणलाई टीका